Split Oversize 2GB Faylka PST ee Faylasha Yar - Tilmaamaha Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn > Products > DataNumen Outlook Repair > Split Weversize 2GB Faylka PST ee Feylasha Yar
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair in loo Kala Baxo Feejignaanta 2GB Faylka PST ee Faylasha Yar
Fiiro gaar ah: Haddii aad haysatid Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho habkan inaad ka soo ceshato faylkaaga weyn ee PST halkii. Haddii kale, fadlan isticmaal habka ku jira hagahan.
Markii aad la kulanto Faylka guud ee Muuqaalka PST (Faylka PST wuxuu la mid yahay ama ka weyn yahay 2GB) oo aan si guul leh ugu heli karin Microsoft Outlook 2002 ama noocyo hoose, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Repair in loo kala qeybiyo feylal yar yar si ay uga yar yahiin 2GB, kana madax banaan midba midka kale, waxaana si gooni ah looga heli karaa Muuqaalka Muuqaalka 2002 ama qoraalkii hore si guul leh
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan uqeybin faylka PST-ka weyn DataNumen Outlook Repair, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
tab, ka dibna dooro xulashada soo socota:
oo u dhig xadka cabbirka qiime ka yar 2GB. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qiime yar oo ah 2GB si faylkaagu uusan u gaarin 2GB markale dhaqso, tusaale ahaan, 1000MB. Fadlan la soco cutubku waa MB.
Xulo feylka 'Outlook PST' ee weyn sida isha PST faylka lagu hagaajinayo:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa
badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa
badhanka si aad u hesho faylka PST ee looga shaqeynayo kombiyuutarka maxalliga ah.
Maaddaama faylka PST uu aad u ballaadhan yahay, waa inuu ku jiraa qaabka Muuqaalka 97-2002. Sidaa darteed, fadlan ku caddee faylkiisa qaabkiisa "Muuqaalka 97-2002" sanduuqa combo
agteeda sanduuqa wax ka beddelka faylka. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair wuxuu baari doonaa isha weyn ee faylka PST si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Hase yeeshe, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah.
Sida caadiga ah, goorma DataNumen Outlook Repair iskaanka iyo kala-goynta ilaha weyn ee faylka oo u kala qaybsama dhawr ka yar, faylka ugu horeeya ee la kala qaybiyo waxaa loo magacaabaa xxxx_fixed.pst, kan labaadna waa xxxx_fixed_1.pst, midka saddexaadna waa xxxx_fixed_2.pst, iyo wixii la mid ah, halka xxxx uu yahay magaca magaca isha faylka PST Tusaale ahaan, ilaha PST ee laga helo Outlook.pst, marka la fiiriyo, feylka ugu horeeya ee la kala jaray wuxuu noqon doonaa Outlook_fixed.pst, kan labaadna wuxuu noqon doonaa Outlook_fixed_1.pst, kan saddexaadna wuxuu noqon doonaa Outlook_fixed_2.pst, iwm.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka go'an si toos ah ama waxaad riixi kartaa
badhanka si aad u caleenta u xulato magaca faylka go'an.
Waxaad dooran kartaa qaabka faylka PST ee go'an sanduuqa combo
agtooda sanduuqa wax ka beddelka faylka, qaababka suurtagalka ah waa Muuqaalka 97-2002 iyo Muuqaalka 2003-2010. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair wuxuu soo saari doonaa faylka PST-ga go'an ee la jaan qaadaya Muuqaalka lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka feylka PST-ga isha, dib u soo kabashada iyo soo ururinta waxyaabaha ku jira, ka dibna ku ridaya waxyaabahan la soo helay feyl cusub oo PST ah oo magaciisu ku qoran yahay Tallaabada 6. Waxaan tusaale ahaan u adeegsan doonnaa Muuqaalka_fixed.pst.
Marka cabirka Outlook_fixed.pst uu gaaro xadka hore ee Tallaabada 2, DataNumen Outlook Repair wuxuu abuuri doonaa feyl labaad oo PST ah oo loo yaqaan 'Outlook_fixed_1.pst', iskuna day inaad waxyaabaha hadhay galiso faylkaas.
Marka faylka labaad uu gaaro xadka hore, DataNumen Outlook Repair wuxuu abuuri doonaa fayl sadexaad oo cusub oo PST ah oo loo yaqaan 'Outlook_fixed_2.pst' si uu ula qabsado waxyaabaha harsan, iyo wixii la mid ah.
In geeddi-socodka, bar horumarka
horay ugu socon doonaa si loo muujiyo horumarka kala qeybsan.
Hawsha ka dib, haddii faylka weyn ee faylka PST loo kala qaybiyey dhowr faylal cusub oo PST ah oo si guul leh u soo baxay, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa faylasha PST kala jaban mid mid la Microsoft Outlook. Oo waxaad ka heli doontaa dhammaan walxaha faylka weyn ee PST-ka ah ee ku faafsan faylashaas la kala qaybiyey.
Fiiro gaar ah: Nooca demo wuxuu soo bandhigi doonaa sanduuqa farriinta soo socota si uu u muujiyo guusha kala-baxa:
Faylasha cusub ee la kala jaray ee PST, waxa ku jira fariimaha iyo lifaaqyada waxaa lagu badali doonaa macluumaad demo. Fadlan dalbo nooca oo buuxa si loo helo waxyaabaha dhabta ah.
Split Weversize 2GB Faylka PST ee Feylasha Yar